सरकारले फिर्ता लियो गुठी विधेयक | Makalukhabar.com
असार ३, काठमाडौं । सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ ।
भूमिव्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरिएको जानकारी दिएकी हुन् ।
यो विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको भइसकेकाे थियाे । तर गुठी मास्ने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध, आलोचना तथा प्रदर्शन चर्किँदै गएपछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
यसबारे प्रधानमन्त्रीले साेमबार काठमाडौंका सांसद तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेका थिए । आजै यस विषयमा जानकारी गराउन प्रधानमन्त्रीले संसदमा समय पनि लिएका थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेपछि बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बोल्न पाएका थिएनन् ।
दुई दिन गुप्तवास बसेर प्रचण्डले तयार पारे प्रतिवेदन, नेपालसँग लगातार छलफल
मंसिर २८, काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुई दिन गुप्तवास बसेर पार्टीको प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । यही मंसिर २९ गते बस्ने पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा पेश गर्नेगरि उनले प्रतिवेदन तयार पारेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको हो । कार्यकारी अध्यक्षको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएपछि दाहालले आफूलाई पार... जारी राख्नुहोस...
भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता गरी लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
मंसिर २७, काठमाडौं । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारलाई ५ बुँदे निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले समितिको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका नेपाली भूमि समावेश गरी नेपालको नक्सा अविलम्ब जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन... जारी राख्नुहोस...
नेकपा सचिवालय सदस्य व्यस्त, बैठक स्थगित
फाइल तस्विरमंसिर २७, काठमाडौं । आज बस्ने भनिएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । सचिवालय सदस्यहरुको कार्यव्यस्तताका कारण आज बस्ने तय भएको बैठक स्थगित भएको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।यही मंसिर १४ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकको कार्यसूची, उ... जारी राख्नुहोस...
नेकपाको सचिवालय बैठक आज, यी विषयमा छलफल हुने
मंसिर २७, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठक आज बस्दैछ । मंसिर १४ गते भएको स्थायी कमिटी बैठकको कार्यसूची, उपनिर्वाचनको समीक्षा, बाँकी रहेका साङ्गठनिक कार्यलगायतका कार्यसूची शुक्रबार बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल हुने पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।त्यसैगरी मंसिर २९ गत... जारी राख्नुहोस...
नेकपाका नेता वामदेवलाई तीन अधिकार !
मंसिर २७, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वामदेव गौतमलाई मुख्य तीन अधिकारको व्यवस्थापनसहित उपाध्यक्ष बनाउने गरी केन्द्रीय सचिवालयले स्थायी समितिमा विधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने भएको छ ।एक वर्षपछि २९ मंसिरमा बोलाइएको स्थायी समिति बैठकमा केन्द्रीय सचिवालयले प्रस्तावित उपाध्यक्षका तीन अधिकार ह... जारी राख्नुहोस...
एकढिक्का देखिएको कांग्रेसमा एकाएक चर्कियो विवाद, गुटगत किचलो सतहमा !
मंसिर २७, काठमाडौं । उपनिर्वाचनका बेला एकढिक्का देखिएको कांग्रेसभित्र एकाएक विवाद चर्किएको छ। संस्थापनइतर समूहले बिहीबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गरेको छ। यससँगै कांग्रेसभित्रको गुटगत किचलो सतहमा आएको हो।१४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौ... जारी राख्नुहोस...
सभामुख छान्न सत्तारुढ नेकपालाई सकस
मंसिर २७, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई सभामुखको उम्मेदवार छान्न सकस परेको छ। पार्टीले दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई अधिकार दिए पनि अहिलेसम्म उनीहरूले नाम टुंगो लगाउन नसकेका हुन्। दुवै अध्यक्ष आफूनिकट व्यक्तिलाई सभामुखको जिम्मेवारीमा पु९याउने रणनीतिमा तल्लीन र... जारी राख्नुहोस...
कांग्रेसका ७ नेकपाका ८ सांसदको पद जाँदै, क-कसको सकिँदैछ कार्यकाल ?
मंसिर २७, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा चुनाव विपक्षी कांग्रेसका लागि सुखद नहुने निश्चित देखिएको छ। राष्ट्रियसभा सांसदको म्याद सकिनु ३५ दिनअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ९ मा चुनाव तोकेको छ। कांग्रेसका ७ सहित १९ सांसदको कार्यकाल फागुनमा सकिँदै छ। पदावधि सकिन लागेका... जारी राख्नुहोस...
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड एकान्त वासमा, के आउँदैछ नयाँ ?
मंसिर २७, काठमाडौं । शनिबार बस्ने सचिवालय र आइतबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा पेस गर्ने गरी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा बनिसकेको र यसमा आवश्यक परामर्श गरेर शुक्रबार अन्तिम रुप दिने दाहालको तयारी छ । पार्टीमा कार्यका... जारी राख्नुहोस...
मोरङ क्षेत्र नं. ३ मा कांग्रेसले ‘क्लिन स्वीप’ गर्छ: डा.शर्मा (भिडियाे सहित)
मोरङ । नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य डा.सुनिल शर्माले आगामी निर्वाचनमा मोरङको क्षेत्र नं.३ मा कांग्रेसले ‘क्लिन स्वीप’ गर्ने दावी गरेका छन् । जी.पी. कोइराला अध्ययन केन्द्रले मोरङको पथरीशनिश्चरेमा आयोजना गरेको सभालाई संबोधन गर्दै डा.शर्माले यस्तो बताएका हुन् । कम्युनिष्टको गढको रुपमा चिनिने ३ नम्ब... जारी राख्नुहोस...